16 job offers Unlimited Channel Co., Ltd. in all regions o
We found 16 job offers Unlimited Channel Co., Ltd. in all regions of Myanmar
About Company : Unlimited Channel Co., Ltd.
Unlimited Channel Limited သည် Samsung Handset များကို အဓိက ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ ပေးလျှက်ရှိသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။
•	Receiveable ပိုင်းတွင်လုပ်ခဲ့ဖူသူဖြစ်ရမည်။ •	စရိတ်များကိုတိကျသေချာစွာ မှန်ကန်မှု၊ ဆီလျော်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Under Pressure အောက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Dead Line အတိုင်း Report တင်နိုင်ခြင� ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Good communication skills. •	ရုပ်ရည်သန့်ပြန်သူဖြစ်ရမည်။
Chief Accountant – Compliance
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Senior A/C – Stock
•	Under Pressure အောက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	Under Pressure အောက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	သွက်လက်တတ်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ရုပ်ရေသန်.ပြန်.သူဖြစ်ရဖြစ်မည်။